Vidiny fihenam-bidy China Line Casting Molding Line mampiasa Flask for Foundry
Ny milina fametahana fasika amam-bidy avo lenta sy antsipirian'ny famonosana fitoeram-potoana fitehirizana entana 30-90 andro aorian'ny nahazoana ny fametrahana Fampiharana Rafitra fananganana fasika maitso dia manome fikirakirana bobongolo azo antoka sy haingana mandritra ny fanasitranana. Ny rafitra fikirakirana ny bobongolo dia namboarina mba hifanaraka amin'ny fantsom-boaloboka tsirairay amin'ny alalàn'ny fitambarana vokatra mahazatra. Ny fikajiana ny rafitra dia afaka manatsara ny famokarana. Kely ny mpiasa no ilaina. Azo noforonina araky ny habaka misy. Ny fizarazaran-tsarimihetsika SF sy ny kirihitra misy tadiny ...
Ny fizarana SF marindrano sy ny tsipika volom-borona mitifitra dia manaparitaka ny fitifirana fasika, miaraka amin'ny fisarahana, ny tavoara ary ny lanjany.
Sandbox, Masinina bobongolo, Famolavolana koveta fanariana, Milina Punch Out, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Famolavolana tavoahangy,